Rastrabani.com | रक्सी सेवन गर्न छोड्नु भए के हुन्छ ? हेर्नुहोस् - Rastrabani.com रक्सी सेवन गर्न छोड्नु भए के हुन्छ ? हेर्नुहोस् - Rastrabani.com
रक्सी सेवन गर्न छोड्नु भए के हुन्छ ? हेर्नुहोस्
नयाँ वर्षमा धेरै मानिस आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । स्वास्थ्य जीवनका लागि धेरैले रक्सी सेवन छोड्ने मानसिकता बनाउँछन् । यसको सिदै फाइदा खल्ती र स्वास्थ्यमा पुग्छ भन्ने आम मानिसको विश्वास छ । बेलायतको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एनएचएसका अनुसार रक्सी सेवन छाड्नु भयो भने यस्तो परिवर्तन आउँछ :